Dowlada Kenya ayaa ku adkeesatay in ay leedahay Hubka saaran markabka ee lagu heysto xeebaha Soomaaliya kuna baaqaday In si xooga ah lagu soo furto.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku qabtay wasiirka Arimaha dibada ee wadanka Kenya Moses Wetang'ula Magaalada Nairobi ayaa waxaa uu ku beeniyay dukumenti ay heshay ritish Broadcasting Corporation oo lagu sheegay in ay hubka Saaran markabka lagu heysto Xeebaha Dalka Soomaaliya laga leeyahay koonfurta Wadanka Sudan.
Waxaa uu wasiirka uu arintaasi ku tilmaamay in ay tahay mid aan waxba ka jirin isla markana ay cadeeymo u heystaan oo wasaarada gaashaandhiga wadanka Kenya ay heyso dukumenti cadeynaya in hubkaasi laga leeyahay wadanka Kenya.
Marka la eego dukumentiga ay heshay British Broadcasting Corporation ayaa cadeeynaya in hubka saaran markabkasi uu usocaday konfurta Wadanka Sudan isla markana ay ku saxiixneeyd dowlada K/sudan.
Waxaa ay dowlada Kenya ku baaqaday in si xoog ah lagu soo furto markabkaasi sida hubka uu muranka ka taagan yahay ee lagu heysto xeebaha dalka Soomaaliya.
Waxaa uu wasiirka Arimaha dibada ee wadanka Kenya Moses Wetang'ula shirkiisa ku sheegay in soo furashada markabkaasi ay tahay wax wanaagsan.
Hadalka Moses Wetang'ula ayaa waxaa uu ku soo Aadayaa xili golaha Ammaanka ee QM ay xalay go’aan ku gaareen in wadan waliba oo caalamka ka mid ah uu maraakiib dagaal u diri karo xeebaha Dalka Soomaaliya si loola dagaalomo kooxah burcad badeeda Soomaalida ah.